आईट्यून्स सहयोगी के हो र यो कसरी असक्षम पारियो? | आईफोन समाचार
आईट्यून्स सहयोगी के हो र यो कसरी असक्षम पारियो?
पाब्लो अपारीसियो | | iTunes, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
जब हामीले याद गर्‍यौं कि हाम्रो कम्प्युटर, यो म्याक वा कुनै पीसी होस्, हामी प्रयोगको रूपमा वा चाहानुहुन्छ त्यति छिटो हुँदैन, हामीले हेर्ने पहिलो कुरा गतिविधि मोनिटर हो। यस अनुप्रयोगमा हामी हेर्छौं कि कुन प्रोग्रामले अधिक संसाधनहरूको उपभोग गरिरहेको छ, जुन केहि ओएस एक्सको पछिल्लो संस्करणबाट हामी केवल सीपीयू खपतमा हेरेर जाँच गर्न सक्छौं। प्रक्रियाहरूको सूचीमा हेर्नु सामान्य छ तिनीहरू मध्ये एक भनिन्छ आईट्यून्स सहयोगी। र त्यो के हो? नामले सुझाव दिएझैं यो "आईट्यून्सका लागि सहायक" हो।
तर आइट्युनलाई के सहयोग चाहिन्छ? नेटिभ एप्पल प्लेयरमा फंक्शन छ जुन USB पोर्टहरू निरन्तर अनुगमनको लागि जिम्मेवार छ। कुन खोज उपयुक्त उपकरण जडानहरू हुन् आईट्यून्सको साथ, जुन आईफोनहरू, आइपडहरू र आईप्याडहरू हुन्, को उद्देश्यका साथ यदि हामीसँग यो कन्फिगर गरिएको छ भने (तलको छविमा देखिएको बक्समा चिह्न लगाएर), आईट्यून्स खोल्नुहोस् जब तपाईं यी उपकरणहरू मध्ये एउटा जडान गर्नुहुन्छ र स्वचालित रूपमा सिnch्ख्रोनाइज सुरु गर्नुहोस्। यस लेखमा हामी यो विजार्डको सबै विवरणहरू बुझाउने कोशिश गर्नेछौं कि कहिलेकाँही यसलाई सक्रिय बनाउनुको कुनै अर्थ छैन।
सब भन्दा पहिले मँ केहि ब्यक्ति बुझाउन चाहान्छु कि केहि प्रयोगकर्ताहरु गलत भयो कि: आईट्यून्स सहयोगी जिम्मेवार छैन हामीले ब्राउज गरिरहँदा भएको कुराले हामी फेला पार्छौं एउटा लिंक (उदाहरण को लागी, खोज इञ्जिनबाट) अनुप्रयोग स्टोर वा म्याक अनुप्रयोग स्टोरबाट एक अनुप्रयोगमा, हामी यसमा क्लिक गर्छौं र आईट्यून्स खुल्छ वा ओएस एक्स को म्याक अनुप्रयोग स्टोर। यो मलाई परेशान गर्ने चीज हो किनकि म ब्राउजरमा जानकारी हेर्न चाहान्छु र यदि मलाई रुचि छ भने म्यानुअली पहुँच गर्नुहोस्।
1 आईट्यून्स सहयोगी के हो?
2 ITunes सहायकलाई असक्षम कसरी गर्ने
3 यदि मैले विन्डोज प्रयोग गरें भने के हुन्छ?
आईट्यून्स सहयोगी के हो?
निर्भर गर्दछ। पहिलो प्रश्न हो: के मसँग आईओएस उपकरण छ?
यदि उत्तर "होईन", मलाई यसको आवश्यक छैन र यसलाई निस्क्रिय गर्न उत्तम छ, किनकी यो बेकार छ।
यदि उत्तर हो हो "ठिक छ, तपाईंले आफैलाई अर्को प्रश्न सोध्नु पर्छ: के म आईट्यून्स स्वत: खोल्न चाहन्छु जब मेरो आईओएस उपकरणले मेरो कम्प्युटरमा जडान गर्दछ र समिकरण सुरु गर्दछ? यदि उत्तर 'होईन' भने, मलाई यसको आवश्यक पर्दैन र यसलाई अक्षम गर्न उत्तम हुन्छ। यदि उत्तर "हो" हो भने, हामी यसलाई सक्रिय छोडिदिन्छौं।
आईट्यून्स हेल्पर केवल हाम्रो आईफोन, आईपड वा आईप्याडको लागि प्रयोग गरिन्छ स्वचालित रूपमा सिnc्क गर्नुहोस् (संगीत, पुस्तकहरू, आदि) हरेक पटक जब हामी यसलाई हाम्रो कम्प्युटरमा जडान गर्छौं र, यदि हामीसँग यो कन्फिगर गरिएको छ भने, ब्याकअप प्रतिलिपि पनि आइट्यून्समा बनाइन्छ।
ITunes सहायकलाई असक्षम कसरी गर्ने
यदि हामीलाई यसको आवश्यक छैन भने, यसलाई निस्क्रिय गर्न उत्तम हुन्छ। प्रक्रिया सजिलो छ र, जे भए पनि हामी संसाधन स्वतन्त्र गर्न सक्नेछौं जुन यस आईट्यून्स सहायकले लगातार उपभोग गरिरहेको छ। हामी यसलाई निम्न अनुसार गर्नेछौं।
हामी प्रणाली प्राथमिकताहरू डकबाट, Launchpad, अनुप्रयोग फोल्डर वा एप्पलबाट माथि बायाँ कुनामा / प्रणाली प्राथमिकताहरूमा खोल्दछौं।
हामी प्रयोगकर्ताहरू र समूहहरूमा क्लिक गर्दछौं।
अर्को, हामी गृह वस्तुहरूमा क्लिक गर्दछौं।
मैले देखेको कुराबाट, यो सुनिश्चित गर्न लायकको छ कि यो फेरि स्टार्टर वस्तुहरूमा थपिने छैन, त्यसैले हामी धेरै कुरा गर्नेछौं। पहिले हामी यसलाई लुकाउन बाकस जाँच गर्छौं।
अर्को, हामी दायाँ क्लिक गर्छौं र फाइंडरमा शो छनौट गर्दछौं। यसले हामीलाई फोल्डरमा लैजान्छ जहाँ यो विजार्ड छ।
एक पटक फोल्डर भित्र, हामी नाम परिवर्तन। मैले यसमा आइट्यून्स हेल्पर राखेको छु, मात्र अन्तिम ई हटाउने।
अर्को, हामी घटाउ प्रतीक (-) मा छुन्छौं, जुन आइट्यून्स सहयोगीलाई घर आईटमबाट हटाउनेछ।
अन्तमा, हामी पुनःस्टार्ट गर्दछौं र प्रमाणित गर्छौं कि जब हामी आईफोनलाई बन्द गरिएको आईट्यून्ससँग कनेक्ट गर्दछौं, यो लामो समय देखि खुल्दैन। हामी गतिविधि मोनिटर पनि खोल्न सक्छौं, "सहयोगी" वा "आईटुनस" खोज्न र यो कहीं पनि देखा पर्दैन भनेर जाँच गर्न सक्छौं। यो हराइसकेको हुनेछ।
यदि तपाइँ यसलाई फिर्ता चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ केवल अनुप्रयोग फोल्डरमा जानुपर्नेछ, आईट्यून्समा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र "प्याकेज सामग्री देखाउनुहोस्" छनौट गर्नुहोस्, सामग्री / म्याकोस प्रविष्ट गर्नुहोस्, "आईट्यून्स सहायक" मा पुनःनामाकरण गर्नुहोस्, र अन्तमा, प्रणाली प्राथमिकता विन्डोमा प्रतिमा तान्नुहोस् जहाँबाट हामीले माथिको चरण in मा यसलाई हटाएका थियौं।
यदि मैले विन्डोज प्रयोग गरें भने के हुन्छ?
ठीक छ, प्रक्रिया धेरै समान छ, तर बाटो तार्किक छ किनकि यो एक फरक अपरेटिंग सिस्टम हो, बिभिन्न। हामी निम्न चरणहरू प्रदर्शन गरेर गर्छौं:
हामी दायाँ विन्डोज स्टार्ट आइकनमा क्लिक गर्दछौं।
हामी कार्य प्रबन्धक चयन गर्दछौं।
जब यो खुल्दछ, हामी घर छनौट गर्दछौं, जुन केन्द्रमा ट्याब हो।
आईट्यून्स सहयोगीमा सूचकको साथ, हामी दायाँ क्लिक गर्दछौं र अक्षम छनौट गर्दछौं।
बाँकी ओएस एक्स जस्तै हो: फेरि क्लिक गर्नुहोस् र फाइल स्थान खोल्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
हामी फाईललाई पुन: नाम दियौं (यो आफैंले फेरि सुरू गर्न भन्दा निश्चित गर्नको लागि उत्तम)। यदि हामी नाम फर्काउन चाहन्छौं भने, बाटो जहाँ आइट्यून्स सहयोगी अवस्थित छ C: \_ प्रोग्राम फाईलहरू T iTunes \_ iTuneHelper
र अन्तमा, हामी रिबुट गर्दछौं।
अवश्य पनि यस बिन्दुमा मैले एउटा कुरा स्वीकार्नुपर्‍यो: विन्डोजमा यसलाई कसरी पुन: सक्षम गर्ने भनेर म निश्चित छु, किनकि म धेरै बर्ष मैक प्रयोगकर्ता भएको छु। म कल्पना गर्दछु कि जब तपाईं यसलाई मूल नाममा फर्काउँनुहुन्छ र यसलाई सुरु गर्नुहुन्छ, आइट्यून्स सहयोगी स्वचालित रूपमा स्टार्टअपमा आफै पुनः सामिल हुनेछ। यदि यसले काम गर्दैन र तपाईं यो सहायक हराउनुहुन्छ भने, तपाईं जहिले पनि आइट्यून्स पुन: स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iTunes » आईट्यून्स सहयोगी के हो र यो कसरी असक्षम पारियो?
ठूलो न्यायाधीश भन्यो
सुरुबाट मेटाइएको ट्युटोका लागि धन्यबाद।
जजग्रानलाई जवाफ दिनुहोस्
गुगल फ्ल्याश विज्ञापन Abandons
TSMC आईफोन for को लागि चिपको विशेष आपूर्तिकर्ता हुनेछ